आजदेखि श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुरु Canada Nepal
भद्रकाली माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् फाल्गुन २४ गते सोमबारको राशिफल
मेष राशि - नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सामान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । परिवारको मार्गदशर्न नमान्दा कार्यको क्षेत्रमा अपजस खेप्नु पर्नेछ । अचल सम्पतीमा ह्रास आउनाले कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला ।
फाल्गुण २४, २०७७ सोमवार ०७:१७:४९ बजे : प्रकाशित
माता मनकामनाले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् आज २०७७ साल फाल्गुन २३ गते आइतबारको राशिफल
मेष राशि - पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आ उनेछ । भोगबिलासमा समय ब्यतित हुनेछ । बोलिमा मधुरता छाउनेछ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तीहरुबाट धोका हुन सक्ने योग रहेकोछ ।
बृष राशि - दम्पति बिच सामान्य मनमुटाब रहला । बाणी तथा स्वास्थ क्षेत्रमा ध्यान दिएको बेश हूनेछ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिच सम्बन्ध सुधार रहनेछ । गरीरहेकोकार्यमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुनाले शारीरिक आलस्यताले सताउनेछ । समय त्यति राम्रो रहेकोछैन ।
मीथुन राशि - जिवन सार्थीको सहयोगमा ब्यापार ब्यबसायमा राम्रै समय रहेको छ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय खर्चिदा उत्तम रहनेछ । पारीवारिक समस्याले भने सताउन सक्नेछ । मान्यजनहरुको सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन ।
कर्कट राशि - खर्च नियन्त्रण गर्न गारो पर्न सक्ला । आफन्त जनहरु टाढिन सक्छन । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रतिद्वन्धीहरुका कारण गरीरहेका कार्यमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ ।
सिंह राशि - मित्र जनको सहयोग बाट मन प्रशन्न रहला । बोलिको कारण साथि भाई टाढिन सक्छन । आय आम्दानिका क्षेत्रमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसिक तनावका कारण कार्य सम्पादनमा झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफुभन्दा सानाको सहयोगबाट कार्य सम्पादित रहनेछन । रचनात्मक कार्यबाट लाभ प्राप्त रहनेछ ।
कन्या राशि - ब्यापार ब्यबसायमा रामा्रे समय रहेको छ । भोगबिलासमा मन जानेछ । खुशीको खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुरा कार्य सम्पादित हुनेछन । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ ।
तुला राशि - कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । यात्रामा सामान्य झन्जट आउन सक्छ । पराक्रम बृद्धि हुने छ । मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला । नजिकका मित्रजनहरुबाट धोका मिल्ने सम्भाबना रहेकोछ । कार्यक्षेत्रमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
बृश्चिक राशि - दाजुभाई बिच मनमुटाब रहन सक्ला । कामको क्षेत्रबाट सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । खानपानका क्षेत्रमा सावधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ । स्वास्थमा समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य वादबिवादको झमेलामा फस्ने सम्भाबना रहेकोछ । संचीत रकम समेत खर्चको योग रहेकोछ ।
धनु राशि - खानपानका प्रभाबले घाटी सम्बन्धि सामान्य असर गर्नेछ । स्वास्थमा देखिएका समस्या बिस्तारै समाधान हुनेछन । कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा सावधानि साथै गोप्यता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । जिवन साथिको सहयोगमा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ ।
मकर राशि - सन्चित रकम खर्चको योग रहेको छ । नयाँ कामको थालनि नगरेकै बेश होला । कामको क्षेत्रबाट सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । भोग बिलासका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । मनोरञ्जनका साधन खरीदका निम्ती सामान्य खर्चको योग बन्नेछ । तपाईको कार्यको चीयोचर्चा गर्नेहरुको सङख्यामा बृद्धिहुनेछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
कुम्भ राशि - गरिरहेको काममा त्यती मन नलाग्नाने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ । ब्यापार ब्यबसायमा रामा्रे समय रहेको छ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम रहेकोछ । नयाँलगानि साथै आयमुलक कार्यका क्षेत्रमा खर्चीएको समय समेत उत्तम रहनेछ । कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोगमा बृद्धिहुनेछ ।
मिन राशि - मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेका कार्य सम्पादनमा निकै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । सामाजिक कार्य साथै सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर जुट्नेछ । समयमा सहि निर्णय गर्न सकिने छ । बिलासिताका साधनको प्रयोमा समय ब्यतित रहनेछ ।ज्यो.प.सरोज घिमिरे
फाल्गुण २३, २०७७ आइतवार ०६:४८:३० बजे : प्रकाशित
शिवलिङ्ग पूजा पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो, लिङ्गकै पूजा किन ?
मनोज भण्डारी / गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ। जोगी, वियोगी, भोगी, नशाका रोगी र योगी सबैमा शिवरात्रि ‘फेमस’ छ । उत्तिकै ‘फेभरेट’ शिवजी पनि छन् । कोही जानेर, कोही मानेर, कोही कर्तव्य ठानेर शिवको आराधना गर्छन् । फाल्गुण कृष्ण चतुर्दशीको रात शिवरात्रि हो ।
यसबारे जान्नु र यस दिनका आराध्य शिवलाई जान्नु पनि आवश्यक छ । कृष्ण जन्माष्टमी मोहरात्रिका नाउँमा प्रसिद्ध छ, नवदुर्गाको अष्टमीको रात कालरात्रिका रूपमा प्रसिद्ध छ भने फागुनको यो रात महारात्रिका रूपमा शास्त्रमा प्रसिद्ध छ । यी तीनवटै रात साधकका निम्ति विशेष मानिन्छन् । तीमध्ये शिवरात्रि विशेष छ ।
कवीरले आफ्नो भजनमा लेखेका छन्, एउटा राम दशरथका घरमा थिए, अर्का राम घटघटमा । त्यसैगरी एउटा शिव सर्वव्यापक छन्, अर्को शिव कैलाशमा बस्छन्, अर्को शिव घटघटमा बस्छन् । तर तीनवटैमा फरक छैन, थुप्रै भाँडामा देखिएको एउटै चन्द्रमा जस्तै ।
शिव शब्दको अर्थ कल्याण हो । त्यही कल्याण स्वरूप सत्य स्वरूप शिव पहिलो शिव हुन् । उनकै अर्को नाउँ परमात्मा हो । ज्ञानीका भाषामा ब्रह्म, भक्तको भाषामा भगवान्, योगीका भाषामा परमात्मा र संसार सिर्जना, पालन र विनाश गर्ने सामथ्र्य भएकाले दार्शनिकको भाषामा ईश्वर ।
सबै त्यही पहिलो शिवको नाउँ हो । दोस्रो शिव नेपालपुत्री पार्वतीका पति, नेपाल आमाका ज्वाईं, नेपालीका भिनाजु हुन् । जसलाई विशेषतः सृष्टिको संहार जिम्मेवारी दिइएको थियो, तिनै शिव रुद्र हुन् । अर्काे शिव सबै–सबैका भित्र भएको जिनिसको नाउँ हो, जो शरीर मर्दा पनि मर्दैन, जुनी फेरिँदा पनि फेरिँदैन । शिवरात्रि त्यो महान् रात्रि हो, जहाँ तेस्रो शिव दोस्रो शिवको सहायताले पहिलो शिव बन्छ।
शिवलिङ्ग : ज्योतिर्लिङ्ग
चितवनकी एकजना चर्चित कविले लेखिन्, शिवलिङ्ग पूजा पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । लिङ्गकै पूजा किन ?
मलाई यो प्रश्नले झन्झनायो । झन्झनायो यस मानेमा कि नेपालमा बौद्धिक भनिएको वर्गले पनि लिङ्ग शब्दको अर्थ पुरुषको जननेन्द्रिय मात्रै बुझेको रहेछ । लिङ्ग शब्दको अर्थ पुरुष जननेन्द्रियमात्रै हुने भए स्त्रीलिङ्ग भन्ने शब्द कहाँबाट बन्थ्यो ?
शिवलिङ्गमा लिङ्ग शब्दको अर्थ हो (चिह्न÷प्रतीक । शिवको लिङ्ग अर्थात् प्रतीक नै शिवलिङ्ग हो । शिवका सबै प्रतिमा शिवलिङ्ग हुन् । सबैका भित्र ज्योति स्वरूपले रहने शिवको प्रतीक शिवलिङ्ग हो । त्यही ज्योतिको प्रतीकलाई ज्योतिर्लिङ्ग पनि भनिन्छ । बल्दो दियोको दीपशिखाको जस्तो आकार हुन्छ, त्यस्तै आकार शिवलिङ्गको हुन्छ ।
भगवान् शिव आफैँले प्रकट गरेका ती शिवलिङ्गहरू १२ वटा छन्, जसलाई द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग भनिन्छ । वनारसमा विश्वनाथका नामले, गुजरातमा सोमनाथका नामले, हिमालयमा केदारनाथका नामले एवम् अन्यान्य ठाउँमा तत्तत् नामले प्रख्यात १२ शिवलिङ्ग शिवले नै उत्पन्न गराएको कुरा शिवपुराणमा उल्लेख छ । र, ती १२ वटै ज्योतिर्लिङ्गको शिर पशुपतिनाथ नामले नेपालमा हामीले चिन्दछौँ ।
भारतको उत्तराखण्डमा केदारनाथको दर्शन गर्नेक्रममा त्यहीँका पुजारीले बताए कि केदारनाथको पछिल्लो भागमात्रै यो हो । यसको शिर नेपाल काठमाडौँमा छ । काठमाडौँस्थित डोलेश्वर मन्दिरबारेमा मलाई नेपालै नदेखेका भारतीय पण्डितले थाहा दिए । ती १२ ज्योतिर्लिङ्ग भारतमै पर्छन् भन्ने भारत र नेपाल सबैका जनमानसमा छ ।
विद्वान्हरूको खोजले बताएअनुसार तीमध्ये एक वैद्यनाथको ज्योतिर्लिङ्ग अछाममा छ । आदि शङ्कराचार्यले वैद्यनाथको प्रार्थना गर्नेक्रममा ‘पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । यसको आसय वैद्यनाथको पूर्वोत्तर दिशामा ज्वालाको निधान छ । लेखक आफैँ पूर्वोत्तर दिशास्थित दैलेखको ज्वाला क्षेत्र र वैद्यनाथ मन्दिर पुगेका छन् । भारतको विहारमा ज्योतिर्लिङ्ग भनिने वैद्यनाथ मन्दिरमा पशुपति मन्दिरमा भन्दा बढी घुइँचो लाग्छ । अछामको वैद्यनाथमा मैले अनुभव गरेका १५ दिनमा १५ जना भक्त पनि उपस्थित भएनन् ।
आफ्नो हातमा रहेको मणिको महŒव के हो जनताले जान्नु जरुरी छ । चन्द्रज्ञान आगममा लिङ्ग शब्दको सुन्दर वर्णन गरेको पाइन्छ । जसको उदरमा सृष्टिपूर्व सारा संसार लीन हुन्छ र संहारमा सारा संसार जसको उदरको गमन गर्छ, त्यो परमात्मा नै लिङ्ग शब्दको अर्थ हो । स्कन्द पुराणमा बताइएअनुसार आकाश स्वयम् लिङ्ग हो । धरती उसको पीठिका हो । यी सबै अनन्त शून्यबाट पैदा भएर उसैमा लीन भएका हुनाले यसलाई लिङ्ग भनिन्छ ।
न्याय वैशेषिक दर्शनका विद्वान् विश्वनाथ भट्टाचार्यले आफ्नो मुक्तावली ग्रन्थमा हावाको लिङ्ग छोइनु हो भनेर बताएका छन् । हावा देखिँदैन, बरु स्पर्शले अनुभूत गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा यो प्रयोग छ । यहाँ पनि लिङ्ग शब्दले जननेन्द्रियलाई बुझाएको छैन ।
तर्कसङ्ग्रहका टीकाकारले ‘लीन (गुप्त) अर्थ गमन गराउने (बुझाउने) भएकाले लिङ्ग भनिएको भन्ने बताएका छन् । भगवान् शिवबारेमा र सृष्टिबारेमा जो गोप्य रहस्य छन्, त्यो बुझाउने हुनाले शिवलिङ्गमा लिङ्ग शब्द प्रयोग भएको हो । यतिविधि स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि लिङ्ग माने जननेन्द्रिय नै बुझ्नुचाहिँ सत्यको अस्वीकारमात्र हो ।
योगेश्वर कृष्ण हुन् र योगीश्वर शिव हुन् । संसारका प्रथम योगी शिव हुन् । उनको योगको सर्वोच्च स्थिति समग्र मानवका लागि अनुकरणीय छ । उदाहरणका लागि हेरौँ– शिवजीको वाहन साँढे हो भने पार्वतीको वाहन सिंह हो । शिवको गलामा, हातमा सर्प रहन्छन् भने गणेशको वाहन मुसा हो । अझ कुमारको वाहन मुजुर हो । मुसालाई सर्पले खान्छ । सर्पलाई मुजुरले खान्छ । मुजुरलाई सिंहले खान्छ । साँढेलाई पनि सिंहले बाँकी राख्दैन । तर, यस्ता जन्मजात शत्रु एउटा घरमा मिलेर बसेका छन् ।
यस्तो हुनुको पछाडिका कारण हामी महर्षि पतञ्जलिको योगसूत्रमा पाउँछौँ । योगसूत्रमा एउटा सूत्र छ– ‘अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः’ । योगीले अवश्य पालन गर्नुपर्ने ‘यम’को पहिलो सर्त अहिंसा हो । अहिंसाको सिँढीबाट माथि उक्लेको महान् योगीका सामुन्नेमा कुनै पनि प्राणीले वैरभाव राख्दैनन्, जन्मजात भए पनि त्याग्छन् भन्नु सूत्रको आशय हो । योगशास्त्रका प्रथम उपदेशकर्ता शिव हुन् । ‘विज्ञान–भैरव–तन्त्र’मा शिवले पार्वतीलाई बताएका ११२ ध्यानसूत्र छन् । शैव र नाथ सम्प्रदायका आदिदेव र आदिनाथ पनि शिव नै हुन् । शिवकै अवतार मानिने शङ्कराचार्यले ज्ञानयोग र उनकै अवतार मानिने गोरक्षनाथले हठयोगको सन्देश विश्वलाई दिए।
शिवजी, गाँजा, भाङ, धतुरो
देवता र राक्षसले मिलेर समुद्र मथे । अमृत निकाल्न समुद्र मथ्दा हलाहल विष निस्क्यो । सारा देवता एवम् राक्षस डरले थरथर भए । तीनै लोक नष्ट हुने डरले विषलाई कतै फाल्न पनि सकिएन । सबैले दयालु आशुतोषलाई सम्झे । शिवले त्यो विषलाई पिउनुभयो । घाँटीमा राख्नुभयो । त्यो विषले कपुरजस्ता गोरा शिवको घाँटी नीलै भयो । नामै नीलकण्ठ भयो । प्राणीमा करुणादृष्टि राखेर शिवले विष पिएको कुरा सर्वविदित छ ।
एकजना मित्रले भन्नुभयो, ‘शिवले गाँजा पिउन हुने । हामी पनि पिउँछौँ, के हुन्छ ?’
मैले भनेँ, ‘गाँजा पिएर गँजडी भइन्छ, शिव बन्न त अर्काका निम्ति विष पिउन सक्नुपर्छ ।’ शिव विषचिकित्साका आचार्य पनि हुन् । सर्प, बिच्छीजस्ता विषालु जन्तु उनका वरपर रहन्छन् । धतुरो आदि अन्य विषालु वस्तु उनकै आसपासमा रहन्छन् । ती सबै विषचिकित्साका साधन हुन सक्छन् । शिवजीले गाँजा, धतुरो खानेचाहिँ होइन ।
शिवबारेमा बताउने शास्त्र शिवपुराण हो । शिवपुराणका चौबीस हजार श्लोकमध्ये कहीँ कतै पनि गाँजा, भाङ, धतुरो खाएको उल्लेख छैन । गाँजा, भाङ, धतुरो शिवजीले खाएको कुरा कुनै पनि शास्त्रमा छैन । खरानी घस्ने जोगीले गाँजा खाए भन्दैमा खरानी घस्ने शिवजीले पनि खान्छन् भनेर दुष्प्रचार गर्नु कहाँसम्मको बुद्धिमानी हो ? गाँजा यद्यपि अनेकौँ रोगको उपचारमा काम आउँछ भन्ने अनुसन्धान विश्वस्तरमा भइरहेका छन् । त्यसको आफ्नै पाटो छ तर शिवजीलाई गाँजासँग जोडेर मजाक बनाइनु उचित होइन ।
प्रश्न उठ्न सक्छ । यतिविधि पात हल्लिनुमा हावा पनि लागेको हुनुपर्छ । शिवजीलाई गाँजा, भाङ, धतुरोसँग कसले जोड्यो त ?
यो काम गँजडीले गरे, स्वस्थानी व्रतकथालाई माध्यम बनाएर । स्वस्थानीमा शिवजीले गाँजा, भाङ, धतुरो खान्छन् भनेर बताइएको छ । स्कन्दपुराण केदारखण्ड माघमाहात्म्यमा हुँदै नभएको गाँजा, भाङ, धतुरो त्यसको अनुवादमा कसरी आयो ? यो गल्ती कसले ग¥यो ? अनुसन्धान आवश्यक छ ।
स्मसानको खरानी शिवको आभूषण हो । शिवको माला भन्नु नाग हुन् । शिवको शिरमा गङ्गा छ । शिवको हातमा त्रिशूल छ । शिवजीका आँखा तीनवटा छन् । चार दिशा नै शिवका कपडा हुन् । शिवको वाहन साँढे हो । शिवका सबै स्वरूप चालचलन अनौठा देखिन्छन् । जति अनौठा छन्, उति नै रहस्यमय छन् ।
शिवको शरीरमा घसिएको खरानी वैराग्यको प्रतीक हो । स्मसानकै खरानी यस अर्थमा कि वैराग्यको उद्बोधक मृत्यु हो । हामी पनि कुनै दिन मर्नुपर्छ भन्ने भाव नआई वैराग्य मनमा जाग्दैन । मृत्युको डरले जन्माएको वैराग्यबाटै मृत्युुलाई जित्नु वेदान्तको सार पनि हो ।
शिवको माला नाग हुन् । सर्पहरू ब्रह्माण्डका विषालु वायु आफू पिउँछन् र संसारलाई जीवित रहन दिन्छन् । शिवजीको स्वभाव त्यस्तै छ र साधकले पनि त्यस्तै बन्नुपर्छ । शिवको शिरमा चन्द्रमाको वास छ । चन्द्रमा मन हो । चन्द्रमालाई आयुर्वेदले समेत अमृतयुक्त भन्छ ।
शिरको माथि रहेको चन्द्रमा निर्मल र शान्त मनले अमृतŒवको प्राप्तिको सङ्केत गर्छ । गङ्गा ज्ञान हो । शिवको मूर्धाबाट निस्केको गङ्गाजलले संसार तृप्त गर्छ । योगीले ब्रह्मरन्तबाट तप्केको अमृत पिउँछन् । ज्ञानीले मस्तिष्कको ज्ञानगङ्गाबाट संसार सिँच्छन् । तीनवटा शूल त्रिशूल हो । ती शूल आत्मिक, भौतिक र दैविक शूल हुन् । ती सबै शिवको हातमा पुगेर नियन्त्रणमा आउँछन् ।
तेस्रो आँखा दुई चर्मचक्षुभन्दा अलग ज्ञानचक्षुको उद्घाटनको सङ्केत गर्छ । ज्ञानी आँखा चिम्लेर पनि सारा देख्छ, त्यसमा तेस्रो आँखा कारण हुन्छ । दिशा नै कपडा हुनु अपरिग्रहको सङ्केत हो । चराहरू गोदाम नबनाई पनि बाँच्छन् । कात्रो र भोटो दुवैको खल्ती हुँदैन । परिग्रहले सुख होइन, दुःख ल्याउँछ, अतः त्यागयोग्य छ । साँढेलाई संस्कृतमा वृषभ भनिन्छ । वृषभ शब्दको अर्थ धर्म हो । शिवझैँ धर्म र न्यायको आश्रयमा रहनु यसको सङ्केत हो ।
शिव : समावेशी देवता
शिवबाट वर मागेर शिव नै भष्म बनाउन तम्सने भष्मासुर होस् अथवा त्रिलोक विजयी रावण होस्, सबै शिवका कृपापात्र छन् । शिवको कृपा रामेश्वर शिवलिङ्ग पुज्ने राम र ताण्डवस्तोत्र रच्ने शिवभक्त रावण दुवैमा बराबर छ । अन्य देवताको तपस्या, यज्ञ, पूजनमा देवता, ऋषि आदि देखिन्छन् तर शिव सबैका आश्रयदाता हुन् ।
भूतप्रेत आदिदेखि लिएर महर्षि शिवकै शरणमा छन् । शिवको पूजालाई धनको आवश्यकता पनि छैन । माटोको लिङ्ग र मूर्तिमा बेलका घाँसपातले पूजा गरेर पानी खन्याइदिए प्रसन्न हुने शिव आशुतोष हुन् ।
शिवको दयालु स्वभावले नै पशुपति नाम रहन गएको हो। शैव दर्शनले पशुपति शब्दको स्पष्ट व्याख्या गर्छ । काम, क्रोध आदि मानवका पाश हुन्छन् । पाशले बाँधिएका जति सबै पशु हुन् । ती सबैलाई पालन गर्ने पति पशुपति हुन् । त्यसैले हिन्दु भनिने नभनिने सबैखाले शिवको पूजा गर्छन् ।
किरात रूप धारण गर्ने किरातेश्वर महादेवको पूजा मुन्दुम पढ्नेले गर्छन् । सुम्निमा पारुहाङका कथा त हामीले सुन्दै आएका छौँ । लामाहरू महादेवलाई ल्हा छेन्पो भनेर समान आस्था राख्छन् । वेद मान्नेहरू बमबम बोलको जयकार साउनमा लगाउँछन् ।
पोर्तुगाली देवताको हातमा रहने अस्त्र त्रिशूलसँग एकदम मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । शिवकै योग सारा संसारले स्वीकार गरिरहेको छ । आचार्य पुष्पदन्त त शिवःमहिम्नः स्तोत्रमा भन्छन्, ‘जानी नजानी सबैले शिवकै पूजा गरिरहेका हुन्छन् । नाना नाम भएका नाना देउता पुज्नेहरू पनि नदीहरू समुद्रमा जसरी शिवमै पुग्छन् ।’
शिव–पार्वती र नेपाल
पुराणअनुसार दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सती थिइन् । माइतमा बुवाले यज्ञ आयोजना गरेको हुँदा नबोलाई पनि गइन् । तर, त्यहाँ पुग्दा आफ्ना पति महादेवको भाग पनि नराखिएको र शिवको निन्दा एवम् अपमान भएको देखेपछि असह्य भएर यज्ञमण्डपमा उपस्थित देवताकै अगाडि योगबलले आफूभित्रको अग्नि उत्पन्न गरेर देह त्याग गरिन् । अपमान मृत्यु हो । पतिको ज्युँदै मृत्यु भएको देखेर सती आफू पनि अग्निमा जलिन् । सती अर्को जन्ममा मेनकाको गर्भबाट पार्वती बनेर जन्मिइन् । तपस्या गरेर शिवजीसँग पुनः विवाह भयो । कथानक यत्ति हो ।
यसैबीचबाट कालान्तरमा पतिको मृत्युुपछि सती जाने प्रथा सुरु गर्ने काम भयो । शास्त्रहरू भने सतीप्रथाको समर्थन गर्दैनन् । सतीको चरित्र आफैँ पनि हामीले सुनेको सतीप्रथाको समर्थन गर्दैन । पार्वती पर्वतकी पुत्री थिइन् ।
योगी नरहरिनाथका अनुसार पर्वत जिल्लाको पाङमा माता पार्वतीको प्राकट्य भएको हो । सीता जसरी नेपालकी छोरी हुन्, जगन्माता पार्वती पनि नेपाली माटोकी पुत्री हुन् । घरबाट भागेर पार्वतीले तपस्या गरेको दिन हरितालिका हो । तपस्याबाट प्रसन्न भई वरदान दिन शिव आएको ठाउँ अहिले गौरीशङ्कर हिमालयका नाउँमा प्रसिद्ध छ ।
शिव–पार्वतीले मृग रूप धारण गरेर लीला गरेको ठाउँ मृगस्थली काठमाडौँ हो । मृत्युको डरले तपस्यामा लागेका मार्कण्डेयलाई चिरञ्जीवी बन्ने आशिष दिएर कालको पनि काल महाकाल भन्ने विशेषण शिवलाई नेपालले नै दिएको हो । कुनै समय राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको पुनरुद्धार भगवान् शिवकै अवतार मानिने शङ्कराचार्यबाट भयो । शिवावतार गोरक्षनाथकै विर्ता गोरक्षा÷गोरखा÷गोर्खा नाउँ हो । महान् शिवभक्त नेमुनिले पालन गरेको नेपाल शिवकै छत्रछाँयामा
हुर्केका बढेको छ । माधव घिमिरेले लेखेकै छन् नि,
यो पार्वतीको प्रिय फूलबारी ।
एकान्त यो चिन्तनको छहारी ।।
कैलाशवासी शिवको ससुराली, सर्वव्यापक शिवको सर्वप्रिय क्रीडाभूमि नेपालले शिवसँग जोडिएको लामो कपाल र गाँजामात्रै सम्झेर शिवलाई बिस्र्यो कि ?
फाल्गुण २२, २०७७ शनिवार ११:५१:५५ बजे : प्रकाशित
# लिङ्गकै पूजा
हलेसी महादेवले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् फाल्गुन २१ गते शुक्रबारको राशिफल
फाल्गुण २१, २०७७ शुक्रवार ०७:५८:२० बजे : प्रकाशित
सधै शंख बजाउनुहोस्, धार्मिक मात्र होइन स्वास्थ्यको दृष्टीले पनि छ फाइदाजनक
काठमाडौं । हिन्दु धर्ममा पुजा गर्दा शंख बजाउने गरिन्छ । हामिले बिहान उठ्ने बित्तिकै घर तथा मन्दिरमा शंख बजाइरहेको सुन्छौं ।
हिन्दु धर्म मान्नेहरुको धेरैजसो घरमा शंख राखिएकै हुन्छ । भजन किर्तनमा पनि शंख बजनाउने हिन्दु धर्ममा चलन पनि छ । शंख बजाउदा जति धार्मिक महत्व छ, त्यति नै वैज्ञानिक प्रभाव पनि छ । हामिले नियमित शंख बजाउदा मन मनमा शान्त हुन्छ ।
शंख बजाउदा स्वास्थ्यको दृष्टीले पनि फाइदाजनक छ । शंखको ध्वनीबाट वातावरणमा भएका जीवाणुहरु नष्ट हुन्छन् । शंख बजाउदा श्वास भर्दै छोड्दै गर्दा स्वास्थ्य ठिक हुन्छ । शंख बजाउने गरेमा कहिल्यै हृदयघात पनि हुँदैन ।
राती शंखमा पानी भरेर राख्नुहोस् र त्यहि पानीले बिहान छालामा लगाएमा छालासम्बन्धी रोग लाग्दैन । शंख बजाउदा लामखुट्टे भाग्ने पनि वैज्ञानिकले आफ्नो प्रयोगबाट सावित गेका छन् ।
शंखमा राखिएको पानी पिएमा पेट सम्बन्धी समस्या पनि हुदैन । शंख बजाउदा दिमागमा भएका नकारात्मक विचारहरु हटेर जान्छन् । कुनै तनाव भएमा शंख बजाएमा मनमा शान्ति हुन्छ ।
फाल्गुण २०, २०७७ बिहिवार २१:४९:०७ बजे : प्रकाशित
# शंख बजाउनु
हलेसी महादेवले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् फाल्गुन २० गते बिहिबारको राशिफल
मेष : नयाँ कार्य थालनिको सम्भाबना रहेकोछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सामान्य मान सम्मान प्राप्तीको सम्भाबना रहेकोछ । जिवन साथिको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ।
बृष : राशि प्रतिश्पर्दा जन्यकार्यमा बिशेष सजग रहनु होला । सामान्य आर्थीक अभावको सम्भाबना रहेकोछ । परिवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । कार्यसम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित रहनेछ ।
मीथुन : रचनात्मक कार्य तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानीका दीर्घकालिन श्रोतहरु फेला पर्नेछन ।स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । नयाँकार्य थालनिको अवसर समेत प्राप्त हुनेछ । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ ।
कर्कट : स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनह?को साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । आम्दानि मध्यम रहने समय रहेकोछ । कार्यक्षेत्रमा शारिरीक आलस्यताले सताउन सक्नेछ ।
सिंह : बल तथा प्रराक्रमका बृद्धिहुने योग रहेकोछ । नयाँ मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा ब्यवधान उत्पन्न गराउनेहरुको बृद्धिहुनेछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय अन्य ब्यतिह?ले प्राप्त गर्नेछन । शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ लगानि गर्दा बिशेष होस पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ ।
कन्या राशि : स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । भोज भतेरजन्य कार्यमा सहभागीताको समय रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यतिहरुबाट सामान्य धोका हुन सक्नेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले प्रतिश्पर्दि शुभचिन्तक बन्नेछन । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ ।
तुला राशि : गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाई रहेता पनि कार्य सम्पादित भने रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । भोज भतेरजन्य कार्यमा सहभागीताको समय रहेकोछ ।
बृश्चिक राशि : स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्नहुन सक्नेछ । तात्कालिन आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथसहयोग प्राप्त रहनेछ । मनको चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा ब्यबधान प्राप्त हुने छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन ।
धनु राशि: बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तमरहेकोछ । आय आर्जनका निम्ती समय राम्रो रहेकोछ । आम्दानिका बिभीन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । खानपानमा साबधानि उत्तम रहनेछ । मित्रजनह?को साथसहयोग प्राप्त रहनेछ । सन्तान शुःख प्राप्त हुनेछ ।
मकर राशि : सामाजिक कार्यमा जुट्नेसमय रहेकोछ । सभासम्मेलनजन्य कार्यमा सामान्य मानसम्मानको प्राप्ती हुनेछ । मान्यजनह?को स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सबारी साधन तथा भौतिक साधनको प्रायोगमा साबधानि अपनाउनु होला । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
कुम्भ राशि : मित्र तथा दाजुभाईहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुद्वारा गरीएको कार्य त्रुटिका कारण तपाईलाई सामान्य तनाव आईपर्न सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा मन लागेपनि सामान्य क्रुटि ले मानशिक चिन्ता दिलाउने छ । तपाईको कमजोरीको फाईदा अरुले उठाउन सक्नेछन ।
मिन राशि : खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाणीका कारण आफन्त जनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । मनमा सामान्य डर पैदा हुने साथै मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । मान्यजनको साथ सहयोले आम्दानिका क्षेत्रमा सहयोग पुग्नेछ ।
फाल्गुण २०, २०७७ बिहिवार ०८:२४:१२ बजे : प्रकाशित